Ahịa ndị ọkachamara na mpempe akwụkwọ 10 Ngwaọrụ Web scraping maka onye mmemme
Ngwa ngwa na ihe dị iche iche dị iche iche, iwepụta data bara uru maka webmasters, ndị ọkà mmụta, ndị nta akụkọ, ndị mmemme, ndị mmepe, na ndị na-ede blọgụ. Ha na-enyere aka inweta data site na ọtụtụ ibe weebụ ma ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ nyocha ahịa na-eji ya eme ihe. A na-ejikwa ha wepu data site na nọmba ekwentị na ozi ịntanetị site na saịtị dị iche iche - damenuhr gruen. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa na ịchọrọ ịchọta ọnụahịa nke ngwaahịa dị iche iche, ị nwere ike iji ngwá ọrụ weebụ na ngwa ngwa ndị a.
1. Cloud Scrape ma ọ bụ Dexi.io
Scrape Cloud ma ọ bụ Dexi.io na-akwado nchịkọta data site na ibe weebụ ma ọ dịghị mkpa ibudata na ngwaọrụ gị. Ọ pụtara na ngwá ọrụ a nwere ike ịnweta ma jiri online ma nwee nchịkọta akụkọ zuru ezu nke nchọgharị iji nweta ihe emere gị. Enwere ike ịchekwa data ahụ na CSV na JSON, na Box.net na Google mbanye.
Ọ bụ igwe na-ekpuchi igwe na ngwa ntinye data. Nke a na-enye ndị mmepe na webmasters aka inweta data bara uru ma na-enye ihe ọmụma n'ime sekọnd. Ndị na-ede blọgụ dị iche iche na ndị nchọpụta ejirila Scrapinghub. Ọ nwere proxy rotator smart, na-enye nkwado megide ọjọọ bots na scraping dum na saịtị n'ime otu awa.
Akụkụ kasị mma nke VisualScraper bụ na data a na-ebupụ na nhazi dị ka SQL, XML, CSV, na JSON. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị dị mfe na data bara uru na-enyocha ngwa na ịntanetị ma na-enye aka wepụ ma weghachite ozi na oge. Atụmatụ ahụ ga-efu gị $ 49 kwa ọnwa ma nyefee gị ohere karịa 100k ibe.
A maara ya nke ọma maka onye na-arụ ọrụ n'ịntanetị ma na-emepụta ụdị dataset dị iche iche maka ndị ọrụ. Import.io na-ebubata data sitere na ibe weebụ dị iche iche ma na-ebupụ ya faịlụ CSV. A maara ya maka nkà na ụzụ ya dị elu ma nwee ike ịbata ọtụtụ nde peeji kwa ụbọchị. Ịnwere ike ibudata ma rụọ ọrụ import.io n'efu. Ọ dakọtara na Linux na Windows ma mekọrịta ihe ndekọ weebụ.
Ọ bụ otu n'ime ngwa ntinye data kachasị mma. Ngwá ọrụ a na-enye ohere nchịkọta na ozugbo na-adị mfe ma na-achọpụta ọtụtụ ibe weebụ. Ọ nwere ike nweta nsonaazụ ọchụchọ gị karịa 200 asụsụ ma chekwaa ntinye na XML, RSS na JSON formats.
Ọ na-enye anyị ohere ịchọta ebe nrụọrụ weebụ niile, blọọgụ, ebe nrụọrụ weebụ mgbasa ozi, ATOM ma ọ bụ ndepụta RSS. Ọ na-azoputa data na ngwugwu a na-agbanwe agbanwe ma na-agbanwe agbanwe, na-ekele API ụlọ ọkụ maka ijikwa ọtụtụ ụdị data na nchebe dịgboroja . Ọ na-enye aka ikpofu spam ma gbochie iji asụsụ eme ihe na-ekwesịghị ekwesị, meziwanye ogo nke data gị ma hụ na nchekwa ya.
Ọ bụ ihe mgbakwunye Firefox na-ewu ewu na ọtụtụ nhazi na njirimara nchịkọta data. Ọ bụghị nanị na ọ na-ewepụta data ma na-echekwa ma na-eme ka ọdịnaya gị dị n'usoro kwesịrị ekwesị. Ị nwere ike ihichapụ ụdị ọ bụla nke ibe weebụ n'enweghị mkpa nke Koodu.
Ọ bụ ihe ọzọ dị ike na ịtụnanya weebụ weebụ na ngwa nyocha ngwa ngwa. 80legs bụ ngwá ọrụ na-agbanwe agbanwe nke na-edozi ihe ị chọrọ ma na-eziga ọtụtụ data ozugbo. Ihe ntanetị weebụ a ejirila ihe karịrị 600,000 ngalaba mebie ma jiri ya dị ka PayPal.
Onye na-ekpochapu ihe bụ ọfụma Chrome na-ewu ewu na nke bara uru na-eme ka ntanetị gị dị mfe. Ọ na-ebupụ data ndị a kpochapụrụ gaa na ntanetị Google ma dabara ma ndị na-amalite ma ndị ọkachamara. Ịnwere ike idetu data ya na ntanetịime ya ma kpochapụ obere XPaths dabere na ihe ị chọrọ.